Mamoha iPhone amin'ny alàlan'ny IMEI amin'ny vidiny tsara indrindra
Raha mitady ny fomba hamaha iPhone an'i IMEI miaraka amin'ny antoka rehetra ary amin'ny vidiny tsara indrindra, dia ataovy amin'ny fahatokisan'ny Actualidad iPhone sy LiberaiPhoneIMEI. Mba hanaovana izany dia mila mifidy firenena fotsiny ianao, mpandrindra ny iPhone-nao ary hiditra ny IMEI-nao. Raha tsy fantatrao ny mpandraharahao na raha voalaza fa nangalatra ny iPhone dia manana serivisy azo atao ihany koa ianao hahitana izany.
1 Ahoana no ahalalana ny IMEI an'ny iPhone hamoha azy?
2 Ahoana ny fomba hamohana ny iPhone amin'ny IMEI?
Ahoana no ahalalana ny IMEI an'ny iPhone hamoha azy?
Misy fomba maro hamela antsika fantaro ny IMEI an'ny iPhone, manomboka amin'ny iray misy amin'ny telefaona finday. Ny tsara indrindra fomba hahitana an'ity kaody ity Ireto manaraka ireto:
Avy amin'ny keypad isa: hahatratra izany isika amin'ny alàlan'ny fanokafana ny fisoratana anarana amin'ny telefaona, kitiho ny Keyboard ary ampidiro ny kaody 06 #. Hiseho eo amin'ny efijery ny isa. Raha hivoaka dia mikitika OK.
Avy amin'ny fikirana iPhone: afaka jerentsika ny IMEI-tsika amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny Settings / General / Fampahalalana ary midina mankany amin'ny toerana ahafahantsika mamaky ny IMEI.
Mijery ny tranga iPhone: ity no mety ho fomba tsotra indrindra, raha mbola eo akaikinay ilay boaty. Ny iPhone IMEI dia eo amin'ny sticker eo an-damosina ary voatanisa ho isa IMEI / MEID.
Ahoana ny fomba hamohana ny iPhone amin'ny IMEI?
Mamoha iPhone amin'ny IMEAvy amin'ny serivisy natolotry ny Actualidad iPhone sy LiberaiPhoneIMEI dia tsy ho mora kokoa izany. Ireto ny fizotrany:
Misafidy ny firenena eo anelanelan'i Espana, Etazonia na Mexico isika amin'ny alàlan'ny fanindriana ireo takelaka etsy ambony latabatra izay manolotra ny serivisy.
Vantany vao voafidy ny firenena dia tsy maintsy misafidy ny mpandraharaha fiavian'ilay iPhone isika. Raha toa ka avy amina mpandraharaha na firenena hafa ny iPhone-tsika, dia tsindrio ny "OPERATORS hafa" ary afaka mahita lisitr'ireo firenena sy mpandraharaha misimisy kokoa izahay. Marihina fa amin'ny tranga any Espana dia azonao atao izany afaho ny iPhone amin'ireo mpitatitra lehibetoy ny Vodafone, Orange na Movistar ankoatry ny hafa.
Avy eo, ampidiro ny IMEI an'ny iPhone izay tianay avoaka ao anaty boaty etsy ambanin'ny lahatsoratra "Ampidiro eto ny IMEI anao."
Tsy maintsy mametraka mailaka fifandraisana ao anaty boaty eto ambanin'ny lahatsoratra «Ampidiro eto ny mailaka». Ny mailaka dia hampiasaina irery sy manokana hampahafantarana antsika fa efa nivoha ny iPhone.
Tsindrio ny bokotra mavo handoavana ny serivisy. Afaka misafidy ny handoa amin'ny carte de crédit na PayPal isika.
Vantany vao voaloa isika dia tsy afaka miandry fotsiny ny handraisana ny mailaka fanamafisana izay hilazan'izy ireo amintsika fa navotsotra ny iPhone ary azo ampiasaina amin'ny mpandraharaha rehetra.
Ahoana ny fahitanao, ny fizotran'ny hamaha iPhone amin'ny Internet Tsy ho mora kokoa izany. Raha te hahafantatra ny mpandraharaha ny terminal ianao alohan'ny hamoahana azy, eto no hanazavana anay ahoana no hahalalana hoe iza ny orinasa iPhone.